Nepal Auto गाडीमा हुने मोसन सिकनेस अर्थात वान्ता रोक्न के गर्ने ? यस्तो छ डाक्टरको सुझाव - Nepal Auto
गाडीमा हुने मोसन सिकनेस अर्थात वान्ता रोक्न के गर्ने ? यस्तो छ डाक्टरको सुझाव
कतिपय मानिसलाई गाडी सम्झने बित्तिकै रिगंटा लाग्ने हुन्छ । अझै धेरैजसो लाई त गाडीमा यात्रा गर्दा अत्यधिक वान्ता भएर शरीर शिथिल बन्छ । त्यसैले यो आममानिसको साझा समस्या हो । आखिर के कारणले गाडीमा यात्रा गर्दा वान्ता हुन्छ ? यसबाट बच्न के गर्नुपर्छ ?
धेरैजसो बालबालिका माइग्रेनका बिरामी, महिनावारी भएकी महिला, गर्भवती महिलामा यसको संवेदनशिलता बढी देखिन्छ । विशेषगरी गाडीमा यात्रा गर्दा शरीरका इन्द्रियहरुले सन्तुलित ढंगले काम गर्न सक्दैनन् । त्यसैले कोही कोही मानिसलाई वान्ता हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
गाडीको एउटा गतिमा यात्रा गर्दा वान्ता हुनु, वाकवाकी लाग्नु सामान्य हो । त्यसैले यस्तो समस्यालाई जटिल रुपमा नलिन चिकित्सकहरु सुझाव दिन्छन् । त्यसैले गाडीमा यात्रा गर्दा वान्ता हुन्छ भने यात्रा गनर््ुभन्दा आधा घन्टा अघि वान्ता नहुने औषधि लिनुपर्ने डा. पुन बताउँछन् । ‘धेरैजसो मान्छेलाई गाडी चढ्ने भन्ने बित्तिकै रिगंटा लाग्न सुरु हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले यस्तो समस्या भएका मानिसले औषधि सेवन गर्दा राम्रो हुन्छ ।’
यस्तै आयुर्वेद चिकित्सक डा. ऋषिराम कोइराला खानपानको कारणले गाडीमा यात्रा गर्दा वाकवाकी अथवा वान्ता हुने बताउँछन् । त्यसैले गाडीमा यात्रा गर्दा मैदाजन्य खानेकुरा नखाने र गाडीमा यात्रा गर्दा सुकमेल, अदुवा मुखमा राख्दा फाइदा पुग्ने उनी बताउँछन् । ‘गाडी चढ्दा बान्ता हुनु वाकवाकी लाग्नु सामान्य समस्या हो,’ उनले भने, ‘यसबाट बच्नका लागि मैदाजन्य खानेकुरा नखाने र यात्रामा निस्कँदा सुकमेल अथवा अदुवा थोरै मुखमा राख्दा यसले वान्ता हुन दिँदैन ।’